ထာဝရဘုရားသညျကိုယျတျောသညျငါ့ကိုယူမယ်လို့အဘယ်အရာကိုသိသည်။ သူကကျွန်မကိုသိပ္ပံပညာ၏ကန့်သတ်မှုကိုဖတ်ရှုနားလည်ကြကုန်အံ့။ တစ်နေ့တွင်ငါသည်ထာဝရဘုရားသညျအမှနျတကယျထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့်ကရာနီ၏ဆုရှင်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။
အဖွားငါ့ကိုကလေးဘဝယုံကွညျခွငျးကို ပေး. , ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားဘူး။ အတည်ပြုချက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါမဖြောင့်ခဲ့သည်။ ငါအချို့သောဘာသာရေး, ဒါပေမယ့် virrade ဖတ်ပါ။
သမ္မာတရားကိုအကြှနျုပျ၏လူမိုက်ထိုးဖောက်, ငါဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်။ မွို့၌ကခရစ်ယာန်တွေကိုကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ ငယ်နှင့်အတူ Nalen တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအစက်အပြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာပိုင်းခွဲအိမျဦးဆောင်သည့်လက်ဝဲဘက်ကနေ, ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားဆွေမျိုးသားချင်းရန်နှင်တံသွေးကြောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသောအခါ, ကဖန်ဆင်းလို့မရပါ။ ဝမ်းနည်းမှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ သူသည်မိမိအခေါနီးပေါ်တွင်လဲလျောင်းအဖြစ် Pentecostal သင်းအုပ်ဆရာကပြောပါတယ်အဖြစ်ပြန်လည်ရှင်သန်မှု, ဝမ်းနည်းမှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တကွကြွလာ။
ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိသည်ကြောင့်သခင်ဘုရား၏, တူညီတဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယူမထားဘူး။ ခရစ်လှပသောဟောင်းသီချင်းများသီဆိုခြင်းနှင့်နှလုံးဟောပြောလော့။ တချို့ကတရားဟောဆရာညျဘုရားသခငျ၏စကားမှန်သမ်မာကမျြးဟောပြောလော့။ တချို့ကပေဂျာပြင်းထန်စွာကမျြးစာကိုလေ့လာတယျ။ တချို့က, ငါ့ကိုကဲ့သို့သိပ္ပံနည်းကျဟောပြောပွဲတွေအများကြီးသို့ fit ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သူအလုပ်လုပ်တဲ့အခါအောက်ခြေကနေစတင်သခင်ဘုရား။ အကြှနျုပျ၏နှင့်အခြားသူများ '' ငယ်စဉ်ကလေးဘဝရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်အတူရွားလှဖြစ်ခဲ့သည်။ အသှငျပွောငျးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ သခင်ဘုရားကိုအစ္စမေးလ်တစ်ချုံအောက်တွင်ချပစ်လေ၏ဘယ်မှာငိုကောင်လေးကငါကြား၏။
အားလုံးကတော့ခရစ်ယာန်များ၏အများအပြားစဉ်မြေးဆက်သားဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်သစ္စာရှိခရစ်ယာန်များ 1800 ၌ငါ့မိသားစုမှာရှိကြ၏။ ခုနစျပါးဗတ္တိဇံဆရာဓမ္မဆရာများ United States ကို သွား. တဦးတည်းကွန်ဂိုအတွက်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတစ်ဦးအဖြစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 10:46